fort_wayne_intl လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #686
I have just run the latest Fort Wayne Int Airport installer.intoafolder of my own. I then transfer the Scenery/Texture to my Addons folder. But in this case I see that two folders are created being (1) fort_wayne_intl_airport_fsx (၂) fort_wayne_intl_airport_fsx_အပိုင်း 2။ Part2 folder ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။ part2 သည် update တစ်ခုဖြစ်ပြီးမူရင်းဖိုင်များကို overwrite လုပ်သလိုပေါင်းစည်းရမည်လား။
fort_wayne_intl လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #687
အဘယ်ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ရှုခင်းကို install လုပ်ဖို့လိုပါသနည်း အဆိုပါ Auto-installer ကိုတိုင်းသဟဇာတရေး Simulator များအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
"fort_wayne_intl_airport_fsxfort_wayne_intl_airport_ "ပထမဦးဆုံးအနေအထားနှင့်ကြွလာ"fsx_part2 "သင်၏ဒုတိယအနေအထားတွင်ကြွလာ FSX ရှုခင်းစာကြည့်တိုက်။
သငျသညျကို manually ဒီရှုခင်းကို install လုပ်ဖို့လိုလျှင်သင်ရှုခင်းစာကြည့်တိုက်ကနေနှစ်ဦးစလုံးဖိုလ်ဒါကိုဖွင်ဖို့ရှိသည်။
fort_wayne_intl လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #689
0.194 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်